Xafiiska Saxaafadda - Abaalmarinta Abaalmarinta - Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Xafiiska Saxaafadda
Xaqiiqooyinka muhiimka ah:
"Dhammaan waxqabadyada internetka, luuqadu waxay leedahay awoodda ugu badan ee lagu noqon karo balwad”Dheh Dhakhaatiirta neerfaha ee reer Holland. Ilaa maanta, mid kasta neurolodaraasad gical (in ka badan 55) waxay bixisaa taageero loogu talagalay filimada internetka ee ku habboon qaabka mukhaadaraadka oo ay ku jiraan toddobo muujinaya sababi. Si kale haddii loo dhigo, ka saar lulataaye astaamaha ayaa yaraanaya ama gebi ahaanba iska daaya.
Porn-Caused Cillad Erectile: Luuqada badan, waxay sare u qaadeysaa halista kacsiga. Qiyaastii 23% ragga da'doodu ka yar tahay 35 ee ka jawaabey sahanka ayaa lahaa xoogaa cillad aan caadi ahayn marka ay galmo la sameynayaan lammaane.
Research oo ay soosaartay Gudiga kala-saarista filimada ee Ingiriiska ayaa ogaatay in UK 1.4 milyan oo caruur ah bishiiba ayaa daawada filimada qaawan. Afar iyo toban sano ama ka yar ayaa ahaa da'da boqolkiiba 60 boqolkiiba carruurta markii ugu horreysay ay arkeen porno internetka ah. Boqolkiiba 56 carruurta da'doodu u dhaxayso 11 ilaa 13 sano jirna waxay jeclaan lahaayeen in laga ilaaliyo waxyaabaha 'ka weyn 18-ka' internetka.
Waxaan qadarinaynaa qiimaha ay leeyihiin saxafiyiintu si aan dadwaynaha ugu baraarujinno halista ku xeeran isticmaalka filimada qaawan ee internetka gaar ahaan caruurta. Waxaan ku faraxsanahay inaan caawinno meelkasta oo suurtagal ah si aan u siino cilmi baaris, wareysiyo iyo macnaha guud ee sheekooyinka.
Diiradeena ugu weyn ee hada waa saameynta sawir-gacmeedka internetka ee caafimaadka maskaxda iyo jireed, xiriirka, helitaanka waxbarashada iyo mas'uuliyadda sharciga, gaar ahaan carruurta iyo dhallinyarada
Hay'adda Reward Foundation waxay soo saartay nooc bilaash ah, isku dhafan qorshooyinka casharka dugsiga loogu talagalay dhalinyarada da'doodu tahay 11 illaa 18 sano oo ku saabsan galmada iyo galmada qaawan ee internetka. Waxaa laga heli karaa noocyada Ingiriiska, Caalamiga iyo Mareykanka.
Free Tilmaamaha Waalidka ee Pornography Internet
Waxaan sidoo kale leenahay casriyeyn joogto ah, oo bilaash ah Tusmada waalidka si loo taageero waxbarashada qoyska iyo doodaha ku saabsan filimada iyo galmada.
Sarkaalkayaga Fulinta Fulinta, Mary Sharpe, U doodaha, iyo Madaxa samafalka, Dr Darryl Mead, ayaa diyaar u ah wareysi. Haddii aad wariye tahay, naga soo wac +44 7717 437 727. Haddii aad qabtid baaritaan aan degdeg ahayn, fadlan la xiriir info@rewardfoundation.org.
Xirmooyinka kooban ee Xafiiska Saxaafadda
Sharciga Xaqiijinta Da'da
Xirmooyinka kooban ee kooban ee ka kooban Xafiiska Saxaafadda ayaa si qoto dheer uga hadlaya asalka Maxay tahay sababta xaqiijinta da'da ee filimada qaawan loo baahan yahay.
War-saxaafadeed Shirka Xaqiijinta Da'da, Juun 2020.
Warbixinta kama dambaysta ah Shirka Xaqiijinta Da'da 2020.